AKỤKỌ NDỤ Mụ na Chineke na Mama M Dịzi ná Mma
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Disemba 2015
Olee ihe ụfọdụ na-agaghịzi adị mgbe ọgwụgwụ ga-abịa?
Ihe ụfọdụ na-agaghịzi adị bụ ọchịchị ụmụ mmadụ, agha na mmegbu, okpukpe ụgha, na ndị na-anaghị asọpụrụ Chineke.—5/1, peeji nke 3-5.
Ònye bụ Gọg nke Megọg e kwuru okwu ya n’akwụkwọ Ezikiel?
Gọg nke Megọg abụghị Setan, kama o yiri ka ọ̀ bụ ọtụtụ mba ndị ga-agbakọ aka chọọ ikpochapụ ndị Chineke ma oké mkpagbu ahụ malitechaa.—5/15, peeji nke 29-30.
Olee ihe isii ga-enyere mmadụ aka ịna-enwe obi ụtọ ma ọ kawa nká?
Baịbụl gbara anyị ume ka anyị (1) na-adị obi umeala, (2) na-eji ejiji dị́ mma, (3) na-eme onwe anyị obi ụtọ, (4) na-enye ndị ọzọ ihe, (5) na-akpa ndị ọzọ nso, (6) na-ekelekwa ndị meere anyị ihe ọma. Ime ihe ndị a ga-enyere mmadụ aka ịna-enwe obi ụtọ ma ọ kawa nká.—6/1, peeji nke 8-10.
Olee otú ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ si gosi na ọ na-emesapụ aka?
N’agbamakwụkwọ e mere na Kena, Jizọs mere ka ihe dị́ ka otu narị galọn mmiri ghọọ mmanya. N’oge ọzọ, o nyere ihe karịrị puku mmadụ ise nri. (Mat. 14:14-21; Jọn 2:6-11) O mere ihe ndị ahụ iji gosi na ọ na-emesapụ aka ka Nna ya.—6/15, peeji nke 4-5.
N’agbanyeghị na anyị ezughị okè, gịnị mere obi ji kwesị isi anyị ike na anyị ga-emeli ihe dị́ Chineke mma?
Job, Lọt, na Devid mejọchara ihe. Ma, ha chọrọ ịna-ejere Chineke ozi. Ha gosiri na ihe ha mere wutere ha, gbanweekwa omume ha. Ha mere ihe dị́ Chineke mma, anyị ga-emelikwa ka ha.—7/1, peeji nke 12-13.
Mbibi Babịlọn Ukwu ahụ ọ̀ pụtara na a ga-egbu ndị niile na-ekpe okpukpe ụgha?
Mba. Ihe Zekaraya 13:4-6 kwuru gosiri na ụfọdụ ndị ndú okpukpe ga-ahapụ okpukpe ha na-ekpe ma kwuo na o nwetụbeghị mgbe ha nọrọ n’okpukpe ụgha ndị ahụ.—7/15, peeji nke 15-16.
Gịnị mere Berak ji kweta na ya ga-aga agha ma ọ bụrụ na Debora ga-eso ya gaa?
Berak nwere okwukwe. Kama ịrịọ Jehova ka o nyekwuo ha ngwá agha, ọ chọrọ ka Debora, bụ́ onye nnọchianya Jehova, nọrọ n’etiti ya na ndị agha ya ka obi sikwuo ha ike. (Ikpe 4:6-8; 5:7)—8/1, peeji nke 13.
Olee ụfọdụ n’ime ihe Onye Kraịst nwere ike ịna-atụgharị uche na ha?
Ụfọdụ n’ime ha bụ ihe ndị Jehova kere, uru Okwu ya bara, ihe ùgwù anyị nwere ikpe ekpere, na ihe mgbapụta ahụ.—8/15, peeji nke 10-13.
Olee otú izere mkpakọrịta ọjọọ si gbasa onye anyị na ya na-akpa?
Anyị kwesịrị ịna-emere ma ndị na-ekweghị ekwe ihe ọma. Ma, é nwee onye a na-emebeghị baptizim, ya bụ, onye na-anaghị erubere Chineke isi, ọ gaghị adị mma ka anyị na ya na-akpa. (1 Kọr. 15:33)—8/15, peeji nke 25.
Gịnị mere okwukwe Pita ji nyụwa ka ọkụ, gịnịkwa nyeere ya aka inweghachi okwukwe?
Okwukwe Pita mere ka o jere ije n’elu mmiri gawa n’ebe Jizọs nọ. (Mat. 14:24-32) Ma mgbe Pita lekwasịrị anya n’ebili mmiri ahụ, ụjọ bịara ya. O mechara lekwasị Jizọs anya ma kwe ka o nyere ya aka.—9/15, peeji nke 16-17.
Ọrụ Ndịozi 28:4 kwuru na ndị Mọlta chere na Pọl onyeozi bụ ogbu ọchụ. Gịnị mere ha ji chee otú ahụ?
Mgbe ajụala tara Pọl, o nwere ike ịbụ na ha chere na chi nwaanyị a na-akpọ di’ke, nke na-ekpe ikpe ziri ezi, na-ata Pọl ahụhụ.—10/1, peeji nke 9.
Gịnị ka anyị kwesịrị ịmụta n’otú ime ọtụtụ ihe si dọpụ uche Mata n’ihe ka mkpa?
N’otu mgbe, Mata nọ na-agba mbọ ka o siere Jizọs nri pụrụ iche. Jizọs kwuru na nwanne ya nwaanyị họọrọ òkè ka mma n’ihi na ọ nọ na-ege ntị n’ihe ọ na-akụzi. Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka ihe ndị na-adịghị mkpa ghara igbochi anyị ime ihe gbasara ofufe Jehova.—10/15, peeji nke 18-20.
Ì Chetara?—Jun 2015
Ì Chetara?—Disemba 2014